China Steel Support Fittings orinasa sy mpamatsy | Zhongming
Luowen azo ovaina Prop prop dia ampiharina amin'ny rafitra fanohanana mijoro amin'ny fananganana hanohanana ny hazo sy ny lamina hazo.
Ny fitaovana vy teleskopika dia ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny fambolena slab ary ho an'ny filàna tranonkala hafa. Ireo fitaovana vy teleskopika dia maharitra maharitra. Miankina amin'ny maodely prop, ny valiny dia azo alofanina na vovoka mifono, hosodoko. Ny fifehezana sy ny famolavolana endrika dia manome fanitsiana haingana.
Ny fandokoana amin'ny formwork miaraka amin'ny props dia misy ny fametrahana zoro maro isaky ny metatra toradroa ilaina mba hahatratrarana haingo azo antoka sy marin-toerana, afaka manamboatra ny hatevin'ny takelaka voafaritra ho an'ny asa.
Steel Prop dia mazàna vita amin'ny takelaka farany ambany, fantsona ivelany, fantsona anatiny, voanjo fihodinana, pin cotter, takelaka ambony ary kojakoja misy tripod aforitra, jack head, ny rafitra dia tsotra sy malefaka.
Ny Steel Prop dia tsotra amin'ny firafitra, noho izany dia mora ny mivory sy manala azy.
Steel Prop dia azo ovaina noho ny fantsona ivelany sy ny fantsona anatiny, ny fantsona anatiny dia mety hitatra sy hihena ao amin'ny fantsona ivelany, ary avy eo azo ahitsy arakaraka ny halavany takiana.
Azo ampiasaina indray ny Steel Prop, ary rehefa tsy misy ilana azy dia azo averina ihany koa ilay fitaovana.
7. fampiasana azo ampiharina:
Steel Prop dia azo ovaina amin'ny halavany takiana arakaraka ny halavan'ny fananganana.
Fanamarihana: Momba ny hatevin'ny fantsona, mamokatra karazana habe maro izahay, toy ny hatevin'ny fantsona 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, na afaka mamokatra toy ny namboarina izahay.
1. Head cross:
fitaovana vy vy teleskopika no nampiasaina tamin'ny fandokoana amina tetik'asa fananganana tsy tambo isaina, ary mbola aleon'ny mpanjifanay azy ireo noho ny fahombiazany sy ny fampiasana azy io. manome fahatokiana sy fiarovana amin'ny toeram-pananganana.
Raha dinihintsika bebe kokoa ny kalitaon'ny akora ampiasaina, ny fizotran'ny famokarana ary ny fitsaboana farany ampiharina amin'ny vokatray, dia ny valiny eto an-toerana
azo antoka. Ireo props ireo dia namboarina sy namboarina manaraka ny torolàlana an'ny UNE 180201. Ny tahirin-kevitra rehetra aseho amin'ity antontan-taratasy ity dia tohanan'ny
fanandramana henjana natao tao amin'ny laboratoara fitiliana anay. Raha mila tsipiriany misimisy momba ny fiasa marina, ny fampiasana ary ny fikirakirana ny vy vy teleskopika, mifandraisa azafady, faly izahay manatrika ny fanontanianao.
Fehikibo Scaffolding Ringlock, Jack screw azo ovaina, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana,